Maxkamadda Ciidanka oo sheegtay in aan la dilin Karin dadka lagu eedeynayo Al-shabaabnimada | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Maxkamadda Ciidanka oo sheegtay in aan la dilin Karin dadka lagu eedeynayo Al-shabaabnimada
Maxkamadda Ciidanka oo sheegtay in aan la dilin Karin dadka lagu eedeynayo Al-shabaabnimada
Bulsha:- Guddoomiyaha Makxamadda darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur SHuute,ayaa sheegay in Gobolka Bakool ay ka soo dhiseen laamo maxkamadda hoostaga islamarkaana la socda kiisaska ka dhaca Gobolkaas.
Arrintan waxaa ay timid kaddib markii Ciidamo ka tirsan Dolwadda ay dhawaan duleedka Xuddur ku dileen Haweeney ay sheegeen in ay ka tirsaneynd Al-shabaab.
Falakas waxaa uu khilaaf ka dhex abuuray Maamulka Gobolka Bakool iyo Saraakiisha Ciidamada dowladda ee jooga Gobolka Bakool,waxaana ay gaartay in ay warbaahinta isaga jawaabaan.
Wafddi uu hoggaaminayay Xasan Cali Nuur shuute ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Gobolka Bakool,waxaana go’aannada ay soo saareen ka mid ah in qofka ka tirsan Al-shabab ee la qabto xitaa isaga oo hub wata aan la delin Karin,islamarkaana ay tahay in lagu simo gacanta Makxmaadda Ciidamad qalabka ee Soomaaliya.
Shuute ayaa sheegay in gobolka Bakool ay ku soo arkeen dad jecel dowladnimada islamarkaana dagaal adaga kula jira Al-shabaab sida uu hadalka u dhigay.